နိုင်ငံ့ရေပိုင်နက်ထဲက တူရကီစစ်သင်္ဘောတွေ ချက်ချင်း ထွက်သွားဖို့ ဂရိအစိုးရ ပြောလိုက်ပြီ - Zet Star
နိုင်ငံ့ရေပိုင်နက်ထဲက တူရကီစစ်သင်္ဘောတွေ ချက်ချင်း ထွက်သွားဖို့ ဂရိအစိုးရ ပြောလိုက်ပြီ
September 4, 2020 ZCC News	0 Comments
မြေထဲပင်လယ် အရှေ့ပိုင်းဒေသမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ စစ်ရေးတင်းမာမှုကို လျော့ချနိုင်ဖို့အတွက် နေတိုးအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ တူရကီနဲ့ ဂရိတို့ဟာ နည်းစနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးမှုလုပ်ဖို့ သဘောတူထားတယ်လို့ နေတိုးအဖွဲ့ရဲ့ အတွင်းရေးမှုးချုပ်က ကြာသပတေးနေ့မှာ သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဂရိနိုင်ငံ အေသင်မြို့ရှိ အရာရှိတဦးကတော့ သဘောတူညီချက်ရတာ မရှိသေးဘူးလို့ ငြင်းဆိုပြီး ဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင် တူရကီဖက်က သင်္ဘောတွေ အရင်ရုတ်သိမ်းပေးဖို့ လိုတယ်လို့ပြောပါတယ်။ တူရကီဖက်က တုန့်ပြန်ချက်တော့ မရသေးပါဘူး။
သမိုင်းကြောင်းအရ ပြိုင်ဖက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဒီနိုင်ငံအကြား ဆက်ဆံရေးဟာ ၄၆ နှစ်တာအတွင်း အဆိုးဆုံး အနေအထားကိုရောက်နေပါတယ်။ ပြသာနာအစကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင်လအတွင်းမှာ တူရကီဖက်ကနေ ရေနံသုတေသနလုပ်ဖို့ဆိုပြီး သင်္ဘောတစီးကို စစ်သင်္ဘောအစောင့်တွေနဲ့အတူ ဂရိနဲ့ ဆိုက်ပရပ်ကျွန်းက သူတို့ပိုင်နက်လို့ပြောထားတဲ့ ရေပြင်ထဲ စေလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။
ဂရိဖက်ကလည်း ချက်ချင်း တပ်လှန့်ပြီး စစ်သဘောၤတွေ အဲဒီဒေသဆီ စေလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို နှစ်ဖက် စစ်ရေးအရ တင်းမာမှု တလကျော် ကြာလာချိန်မှာ နေတိုးဖက်က အခုလို ကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာတာပါ။
နေတိုးအဖွဲ့ရဲ့ ဝက်ဆိုက်မှာဖေါ်ပြထားတဲ့ အတွင်းရေးမှုးချုပ်ရဲ့ ကြေညာချက်အရ -ဂရိနဲ့တူရကီတို့ဟာ အရေးကြီးတဲ့ မဟာမိတ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ နေတိုးအဖွဲ့ဟာ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာပြသာနာတွေကို ဆွေးနွေးအဖြေရှာနိုင်ဖို့ အရေးကြီးတဲ့နေရာတခု ဖြစ်တယ်လို့ ပါရှိပါတယ်။ နေတိုးမဟာမိတ်အဖွဲ့ရဲ့ သွေးစည်းခိုင်မာတဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့အတူ တင်းမာမှုတွေကို အဖြေရှာနိုင်ဖို့ မဟာမိတ်အားလုံးနဲ့ သူထိစပ်ဆောင်ရွက်နေတယ် လို့ အတွင်းရေးမှုးချုပ်ကပြောပါတယ်။
ဂရိအစိုးရအရာရှိကတော့ နေတိုးအတွင်းရေးမှုးချုပ်အနေနဲ့ တင်းမာမှုတွေ လျော့ကျစေရေးအတွက် ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်လာအောင် နည်းနာတွေရှာနေတာကို သူတို့နားလည် ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီဒေသကနေ တူရကီစစ်သင်္ဘောတွေ အရင်ဆုံး ပြန်ဆုတ်ပေးဖို့လိုတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
လက်ရှိ အီးယူ-အလှည့်ကျဥက္ကဌဖြစ်တဲ့ ဂျာမဏီနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ တူရကီသမ္မတတို့ ကြာသပတေးနေ့မှာ တယ်လီဖုန်းနဲ့ စကားပြောပြီး ပင်လယ်ပြင်အငြင်းပွားမှုပြေလည်ရေးအတွက် အလွတ်သဘောဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။. ။
← ဘုရားကိုးဆူ တင်တာနဲ့ ဂြိုဟ်ကြီး ကိုးလုံး ပူဇော်ပွဲတွေကို ဗုဒ္ဓဘာသာတွေ ပြုလုပ်သင့်သလား?
တရုတ် လုံးဝမထင်ထားတဲ့ အမေရိကန်ရဲ့ ဝှက်ဖဲ တချပ် (အမေရိကန်ရဲ့ လျှို့ဝှက်ဗျူဟာ) →